ဒီဇိုင်း - ရှန်ကျန်းကဘုရငျဖူအရောင်ပုံနှိပ် Co. , Ltd မှ
သင့်ရဲ့ file ကိုဖွင့် setting တဲ့အခါမှာစိတျထဲမှာထားရန်သုံးအရေးကြီးသောဒေသများရှိပါသည်:
ဧရိယာကိုချုံ့: ဤတိစာမျက်နှာအရွယ်အစား၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အချောစာအုပ်စာမျက်နှာ၏အမြင့်နှင့်အရှည်မှပွငျဆငျကွပါလိမျ့မညျသောအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထွက်: ဤတိလိုင်းများထက်ကျော်လွန်သောဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးနောက်ခံ, ပုံရိပ်သို့မဟုတ်သင်စာမကျြနှာကိုချွတ်သွေးထွက်ချင်သောမည်သည့်ဒီဇိုင်းကိုဒြပ်စင်ရှိပါကသင်လျအမှတ်ထက်ကျော်လွန် 1/8 "(3 မီလီမီတာ) ကဒီတိုးချဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံသောဧရိယာ: အလျဧရိယာမှနိမ့်ဆုံး 1/8 "(3 မီလီမီတာ) မှာသောလုံခြုံဧရိယာတွင်ပါရှိသောစာသားအားသေတ္တာများနှင့်ခေါင်းစဉ်ထားပါ။
အဆိုပါပရင်တာထိုကြောင့်ထိုစာမျက်နှာအားလုံး4နှစ်ဖက်ပေါ်မှာသွေးထွက် set up လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်, စာရွက်ပေါ်တွင်ချမှတ်ထားစာမျက်နှာများတွင်တက်သတ်မှတ်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုများအတွက် profile များကို Photoshop မှာမဟုတျဘဲ InDesign အတွက်ပုံရိပ်တွေအသုံးချခံရဖို့လိုအပ်:
Photoshop မှာသင့်ရဲ့ image ကိုဖိုင်တွေပြင်ဆင်နေသောအခါ, Edit ကိုကနေ select လုပ် / မီနူးချတစ်စက်ကနေအောက်ပါများထဲမှကိုယ်ရေးနှင့်ရွေးချယ်ဖို့ပြောင်း:
GRACoL များအတွက်• , Adobe ကပရိုဖိုင်း: coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• FOGRA coated, Adobe ကပရိုဖိုင်းများအတွက်: coated FOGRA39 (က ISO 12647-2: 2004)
: uncoated FOGRA47 (က ISO 12647-2: 2004 • FOGRA uncoated, Adobe ကပရိုဖိုင်းကိုများအတွက် )
အဖြစ်တိကျစွာတတ်နိုင်သမျှသင့်ဖိုင်များကိုပွငျဆငျကူညီရန်ဤအပိုင်းကိုအတွင်းလမ်းညွှန်ချက်များပြန်သုံးသပ်ပါ။ ဤသည် preflight ကာလအတွင်းအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးပါမည်။ သင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုမှန်ကန်စွာကို set up ဖြစ်ကြောင်းသေချာမသိကြပါလျှင်သင့်ရဲ့ရောင်းအားအလုပ်အမှုဆောင်အကြံဉာဏ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
•က Adobe InDesign
•ကို Adobe Illustrator (။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်များအတွက်သင့်လျော်သောမအနုပညာတန်းစီဖို့ကန့်သတ် ကျေးဇူးပြု. နှင့်စသည်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်များ, အကျီကဲ့သို့တစ်ခုတည်းစာမျက်နှာစာရွက်စာတမ်းများ,)
•အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျှောက်လွှာဖိုင်များမှ created အဆင်သင့် PDF များ Print
font လမ်းညွှန် Lines
ငါတို့သည်သင်တို့ Postscript, OpenType သို့မဟုတ် TrueType font တွေကိုအသုံးပြုအကြံပြုပါသည်။ တချို့ကဖောထိုကဲ့သို့သောတယောက်က FTP ကနေတဆင့် DVD ဒါမှမဟုတ်အပ်လုဒ်တင်ပေါ်ကိုမီးရှို့အဖြစ်ထုတ်လွှင့်, စဉ်အတွင်းယိုယွင်းရ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတင်သွင်းခြင်းမပြုမီစာလုံးတွေချုံ့ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
တစ်သက်ဆိုင်ရာပရင်တာ font ကိုမဖောင့်ဖန်တီးမထားပါနဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏အပြင်အဆင်အစီအစဉ်တွင်သင်သည် "Helvetica" ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာ "Helvetica Bold" ပရင်တာ font ကိုလည်းမရှိသောကွောငျ့a"ကို Bold" စတိုင်ကို click နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသက်ဆိုင်တဲ့ပရင်တာဖောင်စရာရှိသောကြောင့်သင်တို့မူကား "Futura အကြီးစား 'ကိုရွေးချယ်ပါ, ပြီးတော့အဲဒါကို a" ကို Bold "စတိုင်လျှောက်ထားလျှင်သင် font ကိုတစ်ဦးပိုပြီးခက်ခဲတဲ့ဗားရှင်းမရပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျမဟုတ်ဘဲခြေရင်း font ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးစတိုင်လျှောက်ထားထက်ဖောင့် Menu ထဲမှာတိုက်ရိုက်ချင်တဲ့ဖောင့်ကိုရွေးပါကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ အဆုံးစွန်သော technique ကိုအများကြီးအလေးမဆံ့ကြောင်းအကြီးစားဖောင့်နှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုခန့်မှန်းရခက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ font ကိုအရောင်တက် setting အခါ, စိတ်ထဲတွင်ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်ကျေးဇူးပြုပြီး:
8 PT ။ အစိုင်အခဲအရောင်များ၏ 100% မှာ။
12 PT ။ အရောင်၏ 80% မှ 60% မှာ
16 PT ။ CMYK အရောင်မှာ။ အဆိုပါအစက်မျက်နှာပြင်အဖြစ်ပုံနှိပ်ကြောင့်သေးငယ် CMYK font ကိုအနီရောင်အနားနှင့်အတူပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် fuzzy (သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ကိုချွတ်) ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ထောင်ချောက် image ကိုသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်န်းကျင်ဆိုအဖြူအိမ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်ကွာဟမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန် 0.25pt ကဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် image ကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ အချို့သောခြွင်းချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရောင်များ, ပိတ်မိခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ InDesign ကြိုတင်ထောင်ချောက် setting များကိုရှိပါတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောင်ချောက်စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
သင်တစ်ဦးအစိုင်အခဲနောက်ခံကနေပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်အထဲကခေါက်အခါ trapping သတိထားရပါမည်။ အဖြူရောင်အိမ်ဖွဲ့, ဒါမှမဟုတ်ဘာမှန်ကန်သောထောင်ချောက်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ် overprinting အသုံးပြုပုံ misregistration ဖြစ်ပေါ်လာသောရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Overprinting စာသားကိုသို့မဟုတ်ပါးလွှာဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်လိုင်းများအဘို့အကြံပြုဒါပေမယ့် overprinting နောက်ခံအရောင်ဖို့အရာဝတ္ထုများ၏တာဝန်ပေးအရောင်ထပ်ထည့်မည်သည့်အရာဝတ္ထုအရောင်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါသတိရသည်။
သင်ကအစိမ်းရောင်စာသားကိုရှိပါက (95, မီတာ: 0, y က: က c 80, ဋ: 0) အပြာရောင် (95, မီတာ: 20, y က: 10, ဋ: က c 0) ပေါ်မှာထိုင်နောက်ခံ, သငျသညျမပွု အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစိုင်အခဲစိမ်းပြာရောင်နောက်ခံနဲ့စာသား 16 PT လျှင်ထောင်ချောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သေးငယ်သငျသညျ OVERPRINT မှစာသားသတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။
Image ကို Up ကို Set
မင်္ဂလာပါ res ပုံရိပ်ဖိုင်များကိုအမြဲ TIFF, PSD, AI အသို့မဟုတ် EPS ဖိုင်တွေအဖြစ်တင်သွင်းရပါမည်။ အရည်အသွေးမျိုးပွါးအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ချက်နောက်ဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားပါပဲ။ အားလုံးပုံရိပ်ဖိုင်များကို 300 DPI ကို (လက်မနှုန်းအစက်) နှင့်လိုင်းအနုပညာနောက်ဆုံးအရွယ်အစားမှာ 1200 DPI သည်ဖြစ်သင့်သည်ဖြစ်သင့်သည်။
150 DPI ကိုမှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေတစ်ဦးကကြီးမားသောပုံရိပ် 300 DPI ကိုမှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေကြောင်းတစ်ဝက်ကြောင်းအရွယ်အစားပုံတစ်ပုံမှ function ညီမျှသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအကြမ်းဖျင်းတူညီအရွယ်အစားသောဖိုင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။
သင့်ရဲ့ image ကိုဖိုင်တွေပြင်ဆင်နေသည့်အခါသငျသညျသတင်းအချက်အလက်၏ညာဘက်ငွေပမာဏကိုဖမ်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုသေးငယ်လွန်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့မှုန်ဝါးသို့မဟုတ် pixels ပေါ်လာပါသည်။ သူတို့ကြီးမားလွန်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့အရမ်းခက်ခဲသည့် imagesetter အလုပ်လုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ် Postscript အမှားထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။
ပုံရိပ်တွေထက်နည်း 300 DPI သည် (သို့မဟုတ်လိုင်းအနုပညာများအတွက် 1200 DPI သည်) ကို preflight ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး Hi-res ပုံရိပ်တွေ CMYK အဖြစ်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သည်မဟုတ်, ပိုပြီးအသက် 15 + ထက်% ဒါမှမဟုတ်မျိုးပွားအရွယ်အစား -15% ။ တစ်ဦးရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်အနုပညာလက်ရာအများအားဖြင့်ပုံနှိပ်မျိုးပွါးဘို့အများလွန်းနိမ့် resolution ကဖြစ်ပါတယ်။ .5 အချက်ထက်ပိုမိုပါးလွှာဖြစ်ကြောင်းကိုအနုပညာလက်ရာများအတွင်းလိုင်းများကို အသုံးပြု. ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အားလုံးပုံရိပ်တွေ CMYK, မ RGB ပုံစံအဖြစ်တင်သွင်းရပါမည်။ အားလုံးအရောင် retouched ရပါမည်နှင့်အရောင်မတိုင်မီပုံရိပ်တွေ InDesign သို့တင်သွင်းခံရဖို့ Photoshop မှာတညျ့။
အကြောင်းအရာအကြမ်းသို့မဟုတ် bitmap ပုံရိပ်တွေဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုရန်, pixels ကိုအဖြစ်လူသိများပုံစံနှင့်တူဇယားကွက်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်၏ပုံစံတွင်ပါရှိသောနေကြသည်။ တစ်ဦး bitmap ပုံတွင်တစ်ဦးချင်းစီမှာ Pixel ကတာဝန်ပေးအပ်တိကျတဲ့တည်နေရာနဲ့အရောင်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးဖိုင်အမျိုးအစား TIFF, EPS သို့မဟုတ် Photoshop ကို PSD ဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။
ပုံနှိပ်မျိုးပွါးအဘို့ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေပြင်ဆင်နေသည့်အခါသင်နီးပါးအမြဲ TIFF ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ် PSD ဖိုင်တွေထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ TIFF ဖိုင်တွေသူတို့ InDesign သို့မဟုတ် Quark များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကပိုမိုဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးပွင့်လင်းပုံစံရှိပါတယ်။ PSD ဖိုင်တွေသာကို Adobe Photoshop ကိုအစီအစဉ်တွင်သုံးနိုင်တယ်။
နောက်ထပ်ဘုံ image file ကိုတစ်ဦး JPEG, ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဓာတ်ပုံတွေအတှကျအသုံးပွု, JPEG, web ပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့နှစ်ခုဘုံဖိုင် Format တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ချုံ့ကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာချုံ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပုံနှိပ်အတွက်အသုံးပြုချင်နေတဲ့ JPEG, ဖိုင်ရှိပါက Photoshop မှာဖွင့်ပါနဲ့ကို select: Image-> Mode-> CMYK အရောင် (သို့မဟုတ်အဖြူအမည်း) ။
ဒါဟာသေးငယ်တဦးတည်းမှကြီးမားသောပုံရိပ်ကနေ resample မှ ok ဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop ကိုရိုးရှင်းစွာအပို pixels ကိုထုတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ပုံတစ်ပုံကိုသေးငယ်နှင့်ရှေ့မှာဖြစ်သကဲ့သို့တိုင်းနည်းနည်းအဖြစ်ချွန်ထက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာပိုကြီးတဲ့တစျခုမှသေးငယ်တဲ့ပုံရိပ်ကနေ upsample မှတာကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေ၌, Photoshop ကိုပုံသဏ္ဍာန် pixels ကိုထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအိမ်နီးချင်း pixels ကို၏အရောင်အပေါ်အခြေခံပြီး, ဤအသစ်သော pixels ကိုမှအရောင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့။ ဒါကညာဘက်ပြထားတဲ့အတိုင်းမူလထက် blurrier ကြောင်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေမည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် GIF ကိုပုံရိပ်ဖိုင်များကိုတင်သွင်းဘယ်တော့မှမ။
Black နဲ့ White ကပုံများ
သင်၏စီမံကိန်းအပေါ် မူတည်. 1 အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အရောင် duotones, ဒါမှမဟုတ်4အရောင် CMYK ပုံရိပ်တွေအဖြစ်သင့်ပုံရိပ်တွေကို set up နိုင်ပါတယ်။
1 အရောင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်ဖြစ်စဉ်ကိုအနက်ရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ မီးမောင်းထိုးပြထားသည်နှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်အဖြူအမည်းမှာ set up နေကြသည်။
2 အရောင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်အနက်ရောင်နှင့် PMS အရောင်ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးပြီးထူထောင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ PMS အရောင်အရိပ်များဖို့ grayscalefrom ပျေါလှငျအတွက်အသေးစိတ်ဖန်တီးရန် Sepia အရောင်သို့မဟုတ် PMS မီးခိုးရောင်လျှောက်ထားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4 အရောင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် CMYK သုံးပြီးဖန်တီးမှောင်မိုက်အရိပ်မှပျေါလှငျကနေအများဆုံးအသေးစိတ်များကိုနေကြသည်။4အရောင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်တွေဟာအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုဖွင့် setting အခါ, သင်သည်သင်၏ပုံရိပ်တွေချတဲ့အရောင်မရှိကြောင်းသေချာစေရန်ရှိသည်။ image ကို InDesign သို့တင်သွင်းမီသငျသညျကို Photoshop ထဲမှာသွန်းဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
EPS သို့မဟုတ် AI အ (Illustrator) အဖြစ် output အပေါငျးတို့သအားနည်းချက်ကိုပုံဥပမာဖိုင်တွေ။ အဆိုပါ layout ကိုဆော့ဖျဝဲ၌တူညီသောအရောင်များများ၏အမည်များဤဖိုင်တွေအတွက်အရောင်အမည်များကိုက်ညီရန်သေချာစေပါ။
Adobe Illustrator ၏အချို့မူကွဲသငျသညျကို Adobe Illustrator ရဲ့ default အနေနဲ့ output ကို resolution ကိုမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ setting ကိုချိန်ညှိမထားပါနဲ့။ ဆုံးဖြတ်ချက်လျှော့ချညံ့ဖျင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခရီး၌ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ ကပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း preflight စဉ်အတွင်းမလိုအပ်သောအမှားများကိုပေးပေလိမ့်မည်။
bitmapped ပုံရိပ်တွေအဖြစ် line ကိုအနုပညာဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သူတို့ကိုသင်အဖြူအမည်းကယ်တင်လျှင်, အနားကသူတို့ကိုမှုန်ဝါးသို့မဟုတ်အနီရောင်ပေါ်လာအောင်တစ်ဦး halftone မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ output ကို may ။
အစိုင်အခဲအနက်ရောင်၏ကြီးမားသောဧရိယာသည်အခြား built တင့်ဖြတ်ကူးပါလိမ့်မည်လျှင်, အရောင်ကျော်ဒေသများနှင့်အရောင်ကျော်မဟုတျပါသောသူတို့အကြားသိပ်သည်းဆတစ်ဦးကွာခြားချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းa"ကိုငွေရတတ်သောသူကအနက်ရောင်" တင့ရောနှောတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်:
စိမ်းပြာ = 30%
ပန်းခရမ်း = 30%
အဝါရောင် = 10%
က Black = 100%
ဒီကြွယ်ဝတဲ့အနက်ရောင်အသုံးပြုခြင်းအနက်ရောင်စိုင်အခဲအတွက်မဆိုသိသာသိပ်သည်းဆမူကွဲကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစကအခြားအရောင်များကိုဖြတ်ကူးမည်မဟုတ်ပါလျှင်ပင်တစ်ဦးသိပ်သည်း, ယူနီဖောင်းအစိုင်အခဲအနက်ရောင်, ထုတ်လုပ်ဘို့အကောင်းတစ်ပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, အမျိုးအစားနှင့်ပါးလွှာသောပုံဥပမာကိုဒြပ်စင်ကဲ့သို့သောအခြားအနက်ရောင် element တွေကိုအနက်ရောင်နှင့် overprint ဟုသတ်မှတ် 100% တက်လုပ်ရပါမည်။
ချွတ် set ကာကွယ်တားဆီးဖို့အဖြူရောင်စာမျက်နှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစိုင်အခဲမှောင်မိုက်အရောင်ဖြစ်ကြောင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အရောင်တင်ဆီဖြည့်စွက်စဉ်းစားပါ။
သင့်ရဲ့ Project မှဖြန့်ချိ
သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုတင်သွင်းခြင်းမပြုမီ, သင်၏ဖိုင်များကိုစစ်ဆေး InDesign အတွက် Preflight command ကိုသုံးပါ။
အဆိုပါ layout ကိုအသုံးပြုကြသည်သာပုံရိပ်တွေ•။ သင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုစုဆောင်းပြီးနောက်ဆက်နွယ်နေဖိုင်တွေများ၏အမည်များနှင့်တည်နေရာကိုပြောင်းလဲပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။
•အားလုံး bitmapped image ကိုအရွယ်အစားကအနည်းဆုံး 300 DPI သည်ဖြစ်သင့်သည်, လူအပေါင်းတို့အားနည်းချက်ကိုလိုင်းအနုပညာဖိုင်တွေကအနည်းဆုံး 1200 DPI သည်ဖြစ်သင့်သည်
• TIFF နှင့် EPS CMYK, မ RGB ဖြစ်သင့်ဖိုင်တွေ။ TIFF အဖြစ်အားလုံးပုံများ, လူအပေါင်းတို့အားနည်းချက်ကိုလိုင်းအနုပညာ EPS အဖြစ်။
•အားလုံး Include ဖော ဖောငျ့လေ့အသုံးပြုသည်ပင်လျှင်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပရင်တာဖောင့်များနှင့်အတူအသုံးပြုသော။
•အားလုံးအသုံးမပြုတဲ့အရောင်များကိုရှင်းလင်း။ InDesign ရဲ့အရောင် palette တစ်သင်တို့သည်ဤ swatches နေရာချထားခြင်းနှင့်ဖျက်ပစ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည် option ကို "အားလုံးအသုံးမပြုတဲ့ကို Select လုပ်ပါ" ရှိပါတယ်။
• Photoshop ကိုစာရွက်စာတမ်းများအသုံးမပြုတဲ့သို့မဟုတ်ဝှက်ထားသောအလွှာမပါဝင်ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အမြန်ပေးပို့ခြင်းအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါနှငျ့လြှို့ဝှကျအလွှာမျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖန်တီးလိမ့်မည်။
•လုံးဝကိုအခြားတ္ထုအားဖြင့်ဝှက်ထားသော pasteboard သို့မဟုတ်ဒြပ်စင်ပေါ်တွင်အသုံးမပြုတဲ့ element တွေကိုရှင်းလင်း။
•စာမျက်နှာအားလုံးဖြတ်တောက်မှုနှင့်ရှိသင့် သွေးထွက် (သွေးထွက်အားလုံး4နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်လျကျော်လွန်ပြီး "3mm သို့မဟုတ် 1/4 တိုးချဲ့သင့်ပါတယ်) ။
•နေရာချထားနှင့် / သို့မဟုတ်လေဆာ printout အဘို့အနိမ့် res PDF များပါဝင်စေပါ။ အဆိုပါဖိုလီယိုနေရာချထားဘို့ res PDF များ print ထုတ်သို့မဟုတ်အနိမ့်ကြဘူးလျှင်လေဆာရောင်ခြည်အပေါ်စာမျက်နှာနံပါတ်များကိုရေးထားလော့။
•သီးခြားလျှောက်လွှာသို့မဟုတ် PDF files တွေကိုစာသားနဲ့ဖုံးဘို့, ကိစ္စတွင်မဆိုအခြားအစိတ်အပိုင်းများကို (endpapers, binding, etc) Include
သင်, wetransfer မှတဆင့် Hightail သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းဖိုင်ဝေမျှခြင်းအစီအစဉ်သို့မဟုတ်ခရီးဆောင် drive ကို (ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ရန် cable ကိုထည့်သွင်းရန်သေချာအောင်) သင်၏ဖိုင်များကိုတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ InDesing သို့မဟုတ် Hi-res တိအမှတ်အသားများနှင့်အတူအဆင်သင့် PDF များ print ထုတ် Submit နှင့်ပါဝင်သည် bleeds ။
: PDF များဖွင့်လှစ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့, Adobe ကအကူအညီ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-မရှိမဖြစ်-အရင်ကဆိုရင်